Tacliinta - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Maxaa loo Doortaa Shir-madaxeedka
Waxa la filayo
Ikhtiyaarrada Kobcinta Qofka
COVID 19 cusbooneysiin
Adeegyada Gaarka ah
Guddiga Dugsiga Summit
Ka Qayb Qaadashada Sinnaanta Kala Duwan
Waxbarista Virtualku ma u habboon tahay ilmahayga?
Shuruudaha / Waxyaabaha Laga Filayo
Waa maxay Koleejku Hore?
Waa maxay sababta Kulliyadda Hore?
Wargeysyada Hore ee Kuleejka
Dhacdooyinka Kulliyadda Hore
Waa maxay xigta
Hadafka Barnaamijka Ikhtiyaariyada Dugsiga Hoose waa in la siiyo arday kasta fursad uu ku maro dariiqa waxbarasho ee shaqsi ahaaneed ee u dhigma qaabkooda waxbarasho iyo heerka xirfadiisa. Waalidiinta, maadaama Tababaraha Ardaygu uu bixinayo 90% waxbarista haddii ardaygu go'aansado inuu nagu soo biiro fasallada kobcinta.
Ardayda ayaa awood u leh inay u isticmaalaan miisaaniyadda manhajka loo xilsaaro inay ku doortaan manhajka maaddooyinka asaasiga ah ka dib qaab qalin qaabeed iyo qaab warqad ah, iyo sidoo kale barnaamijyo gacan-ka-qabasho ah oo ka socda Rainbow Resource iyo / ama Timberdoodle, oo ah labada iibiyayaal ee ay SLC la shaqeeyaan. Waxaan kaliya ku darnay ikhtiyaar manhaj cusub oo heer caalami ah dhammaan heerarka fasal anaga oo adeegsanayna manhajka Calvert. Haddii aadan hubin halka laga bilaabayo, markii la diiwaangaliyo, waxaa lagugu salaami doonaa emayl ka socda La-Taliyaha Tacliinta oo kugu socodsiin doona tillaabooyinka xulashada manhajka. La-Taliyahayaga Tacliinta wuxuu kaloo kula wadaagi karaa ikhtiyaarada demo ee aan heli karno.
Ardaydu sidoo kale waxay ikhtiyaar u leeyihiin inay ku kabaan waxbarashadooda ilaha internetka sida Khan Academy, MobyMax iyo NewsELA - kuwaas oo dhammaantood aan ku siino bilaash dhammaan ardaydeena.
Ardaydu sidoo kale waxay haystaan ​​ikhtiyaar inay u isticmaalaan qaar ka mid ah miisaaniyadaha manhajka barnaamijyada dheeraadka ah ee la bixiyay sida Akhriska Ukunnada iyo Xisaabta Xisaabta.
Ardayda fasalka 3 iyo wixii ka sareeya waxay waliba u adeegsan karaan miisaaniyaddooda manhajka maadooyinka aasaasiga ah ee sida tooska ah loo isticmaalo sida Beast Academy for Math, ama OdysseyWare.
Markii la qoro, ardayda waxaa looga baahan doonaa inay dhammaystiraan qiimeynta STAR 360 ee Akhriska iyo Xisaabta (Qorista Hore ee loogu talagalay ardayda Kinder iyo fasalka 1aad). Natiijooyinka qiimeyntani waa inay ku siiyaan meel bilow ah oo ah waxa ilmahaagu u baahan yahay.
Barnaamijka Ikhtiyaariga ah ee Dugsiyada Hoose wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka doorato ilaha waxbarasho ee salka ku haya guriga, ha ahaato qadka, warqad iyo qalin, ama agab waxqabad, halka sidoo kale aad fursad u siineyso fasalo si toos ah loo farayo iyo fasallo kobcinta khadka tooska ah, safarada garoonka, iyo nashaadaadka dugsiga oo ballaaran.
Codso Barnaamijka Fursadaha Dugsiga Hoose adigoo gujinaya badhanka 'Codso' halkan, ama meel kale oo boggan ah.
Qoysaska guuleysta waa inay awoodaan inay ballan qaadaan:
Barashada saacadaha 4-5 maalin kasta
Xiriir macno leh oo lala yeesho macallimiinta laba jeer usbuucii
Ku yeesho guriga Tababbarka waalidka / waxbarashadda guriga
Gal marin u hel internetka
Goobta Eagle Creek
30391 SE Wadada 211
Eagle Creek, AMA 97022
Telefoon - 503.630.5001
Fiiri wargeysyada hadda iyo kuwii hore halkan.
Nidaamka Takoorka Kahortaga
Fiiri jadwalka cabirka buuxa halkan ama la macaamil jadwalka ugu yar ee hoose.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Nidaamka Takoorka Kahortaga
© Axdiga Wax Barashada Shirka 2021
La xidhiidh maanta si aad wax badan uga barato barnaamijyada Summit
Geli macluumaadkaaga xiriirka oo dooro barnaamijka aad xiisaynayso. Diiwaangelinta weli way furan tahay sannad dugsiyeedka 2021/22!
Magaca Koowaad iyo Magaca Dambe
Xulashada Dugsiga Hoose k-5
Akademiyada Dhaqanka 6-12
Dugsiga Hore 10-12